व्यक्ति होइन प्रवृत्ति फेर्नुपर्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
डा. डिला संग्रौला -पन्त
मुलुकमा भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा, ढिलासुस्ती, कालोबजारी व्याप्त छ । शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासन कागजमा सीमित भएका छन् । सरकार जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारबाट धेरै टाढा छ । यस्तो हुनुमा व्यक्तिको दोष हो कि प्रवृत्तिको ? पहिचान गर्न जरुरी छ । सरकार र सचिवालय चुस्त–दुरुस्त बनाउने हो भने, पहिला प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यशैली फेर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्ति जति हेरफेर गरे पनि सुखद परिणामको प्रत्याभूति हुँदैन । किनभने सत्ता र शक्तिको उन्मादमा अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने र सम्पत्ति थुपार्ने शैली क्यान्सरजस्तै झाँगिएको छ । त्यसैले व्यक्ति परिवर्तन गौण हो, प्रवृत्ति, सोच र कार्यशैली प्रमुख हो । सुधारप्रति प्रधानमन्त्री साँच्चैप्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ—